ခြင်္သေ့တစ်ကောင် ယန်း ၁၀ သောင်းသာပေးရတဲ့ ဂျပန်တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့အမှောင်ဘက်အခြမ်း !! - JAPO Japanese News
လာ 16 Nov 2020, 14:14 ညနေ
Earth လို့ခေါ်တဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ခြင်္သေ့လေးဟာ Hiroshima မြို့ Asa Zoological Park မှာ တောဘုရင်ကဲ့သို့ကြီးပြင်းခဲ့ရပြီး လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ရဲ့ အချစ်ကိုရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ ဂျပန်တိရစ္ဆာန်ရုံရှိ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ထားမှုမှာ ခြင်္သေ့ဆိုတာ အဆင့်နိမ့်နေပါတယ်။
Earth ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဆောင်းဦးမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှာပဲ တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ အခြားသောခြင်္သေ့ငယ် ၂ ကောင်လည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခြင်္သေ့လေး ၃ ကောင်ဟာတစ်ချိန်တည်းကြီးပြင်းခဲ့ပြီး လည်ပတ်သူတို့ကြားမှာလည်း ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Earth အသက် ၁ နှစ်ခွဲအရွယ်ရောက်လာတဲ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာတော့ ကုန်တင်ကားနဲ့တင်ဆောင်ပြီး ၅၀၀ ကီလိုမီတာဝေးတဲ့ Aichi ခရိုင် Toyohashi မြို့က တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်ရုက္ခဗေဒပန်းခြံကိုပြောင်း‌ရွေ့လိုက်ကြပါတယ်။
သူထွက်ခွာချိန်မှာ Earth ဟာ Hiroshima ခရိုင်ရဲ့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဥ်မှာ တစ်ကောင်တည်းကျန်ကြွင်းတော့တဲ့ ခြင်္သေ့ငယ်ပါ။ အခြားသောခြင်္သေ့ငယ်တွေဟာလည်း Earth ကဲ့သို့ပဲအခြားသောတိရစ္ဆာန်ရုံတွေသို့ပြောင်းရွေ့ကုန်ပါပြီ။ ခြင်္သေ့ငယ်ဟာ လည်ဆံမွေးတောင် မပေါက်သေးပါဘူး။
Shizuoka ခရိုင်က Rep Japan ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်ရောင်းဝယ်သူ Tsuyoshi Shirawa ဆိုသူက သူတို့မှာခြင်္သေ့များစွာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။
ခြင်္သေ့အမြောက်အများကျန်ရစ်တယ်လို့ Shirawa ဆိုသူကဆက်ပြောပါတယ်။
“ အကယ်၍ ခင်ဗျားခြင်္သေ့မွေးချင်တယ်ဆို လူတွေခင်ဗျားကိုအလကားတောင်ပေးလိမ့်မယ်” “ အကယ်၍အလကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် ခင်ဗျား ယန်း 200,000 yen ($1,900) လောက်ပဲပေးရမယ်” လို့ပြောပါတယ်။ ဒီဈေးဟာတကယ်တော့ ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးထက်ကို ဈေးပေါနေပါတယ်။
Asahi Shimbun သတင်းဌာရဲ့မေးမြန်းချက်အရသိရတာဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကနေ ၅ နှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးရှိအများပိုင်တိရစ္ဆာန်ရုံတွေကနေ ခြင်္သေ့ ၁၄ ကောင်ကိုတင်ပို့ပြီး၊ သူတို့ထဲက ၁၁ ကောင်ကို အခမဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Kumamoto စီရင်စုရဲ့ မြို့တော်၊ သတ္တဗေဒနှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်များရှိတဲ့ Kumamoto မြို့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ပုဂ္ဂလိကပိုင်တိရစ္ဆာန်ရုံကနေ ခြင်္သေ့အထီးတစ်ကောင်ကို ယန်း ၁၀ သောင်းနဲ့ ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ယန်း ၁၀ သောင်းပါ။
တိုကျိုမြို့ပြအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ ယန်း ၁၀ သောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိ ကြောင်တစ်ကောင်တန်ဖိုးကတော့ ယန်းသောင်း ၂၀ ၊ သောင်း ၄၀ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ ၂ ခုကိုယှဥ်ကြည့်ရင် မေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိလာတယ်။ ဘာကြောင့်ခြင်္သေ့ဈေးကနိမ့်ရသလဲ?
Shirawa စံက “ ခြင်္သေ့တွေဟာ လျင်မြန်စွာပေါက်ဖွားကြတယ်။ ခြင်္သေ့အမဟာ တစ်ကြိမ်ကိုကလေး ၃ ကောင်မွေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ခြင်္သေ့သားပေါက်တွေဟာ လည်ပတ်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်စေလို့ တိရစ္ဆာန်ရုံအများစုကလည်း သားပေါက်တွေကိုသာ ကျွေးမွေးဖို့သဘောကျကြတယ်” လို့ပြောပါတယ်။
သို့သော် အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ မိတ်လိုက်မှုတွေ၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် တိရစ္ဆာန်ရုံဘက်က risk တွေပိုများလာပါတယ်။
အင်အားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီး မာန်ဖီလာတတ်တဲ့ခြင်္သေ့တွေအတွက်တော့ သူတို့နေထိုင်ဖို့နဲ့ကျက်စားဖို့ ကျယ်ဝန်းတဲ့ဧရိယာလိုအပ်လာပါတယ်။
Hiroshima မြို့သတ္တဗေဒဥယျာဥ် ရဲ့တာဝန်ရှိသူTeruaki Takeuchi ဆိုသူက “ ခြင်္သေ့ဟာ ကြောင်မျိုးနွယ်အကြီးစားဖြစ်တယ်။ သူတို့ကြီးလာတဲ့အခါ၊ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ကိုသွားခွင့်ပေးရမယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲ တိရစ္ဆာန်ရုံကနေ Earth ကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာစေခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။
“ ခြင်္သေ့တွေကိုကြာကြာထားရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ (Earth) အတွက်နေစရာနေရာအသစ်ရှာပြီးတာနဲ့ တိရစ္ဆာန်ရုံကနေထုတ်မှာပါ။ သူ့အတွက်ပေးဖို့လည်းမလိုအပ်ဘူး”
ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ရုံတွေကနေ နေ့တိုင်းလိုလိုအကောင်ရေအသစ်တွေမွေးဖွားနေပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းခရီးစဥ်ကမတည်မြဲပါဘူး။
သူတို့အကောင်ကြီးလာတယ်၊ အရွယ်ရောက်လာတယ်။ ဒီအချိန်မှာတိရစ္ဆာန်ရုံက သူတို့ကိုလာခေါ်ယူမွေးစားမယ့် ပိုင်ရှင်အသစ်ကိုရှာပါတော့တယ်။ ဒီလိုတိရစ္ဆာန်ရုံစီးပွားရေးလောကမှာ ဒီလိုအကောင်တွေကို “ ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေ” လို့သိကြပါတယ်။